Chitter: Gbanwee ndị ahịa ka ha bụrụ ndị nnọchite anya ọha nke ndị nnọchiteanya! | Martech Zone
Chitter: Gbanwee ndị ahịa ka ha bụrụ ndị nnọchite anya ọha na-ahụ maka mmekọrịta!
Chita bụ ngwa na-akwụghachi gị ụgwọ dị iche iche na ego efu maka izipu foto na netwọkụ mmekọrịta gị. Businesslọ ọrụ achụmnta ego nwere ike isonyere na enweghị ọnụ, ịtọlite ​​onyinye ndị ọrụ nwere ike ịchọpụta site na ikpo okwu. Iji gbapụta onyinye ahụ, naanị ha ga-ekerịta foto nke na-akwalite nguzobe na netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta ha.
chit (nkọwa) - Onyinye pụrụ iche, ohere ịchekwa ego, ihe mkpali, ma ọ bụ coupon dị naanị na ngwa Chitter.
Chita bụ a ọnọdụ dabeere chọpụtara ngwa dị na gam akporo na iOS. Site na ịkekọrịta foto, onye ahịa gị na - ere ahịa ma na - akwalite ngwaahịa, ọrụ na ahụmịhe maka gị. Nke a nwere ike ịbawanye ogo gị na visibiliti na mgbasa ozi mmekọrịta, belata ọnụ ahịa nnweta ndị ahịa ọhụụ, ma bulie njide ndị ahịa.
Chita enwere n'efu maka ụlọ ọrụ ịdebanye aha na ọ na-ewe nkeji ole na ole iji melite ya. Free nweere onwe ị bulite ọtụtụ Chits dị ka ị ga-amasị-ahụ anya na azụmahịa gị ma ọ bụ òtù Chitter ngosi utịp ke mobile ngwa. Chita nwere njirimara dị elu nke na-eme ka ndenye ahọpụtara site na engines ọchụchọ, nweta adreesị ozi-e onye ọrụ ma lelee nchịkọta nke onu ahia ndi ahia gi.
Eric Dye nwere oke mkparịta ụka ya na Seth Knapp, onye isi ndị isi ọrụ Chitter, na ndị entrepreneur Podcast Network.
Tags: ntinyeakwadoigwe okuịkwado ndị ahịaeric daikpalienkwupụta ụlọ ahịaMgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa oziụlọ ahịa na-ere ahịaset knappmmekọrịta mmadụ na ibe ya
Google Search Console Scared Crap of Me!